I-Ballyboe Cottage - I-Airbnb
Ilitye elinqabileyo. I-Ballyboe yiNdwendwe yaseDonegal eyakhiwe ngaphezulu kweminyaka eli-100 eyadlulayo kodwa yaphuculwa ukuze ikunike undwendwe olungcono kuwo omabini ehlabathi. Isetwe kwindawo yayo yeehektare ezi-6 zomhlaba wokufama, indlwana iye yahlaziywa ngobuntununtunu kwaye yaphuculwa kwaye idibanisa imfihlo epheleleyo kunye nobumfihlo kunye nomhlaba ojikelezileyo weefama (iindwendwe zifumana kuphela indawo yokuhlala) ukanti ikufutshane kwiindawo ezinomtsalane kunye needolophu ezikufutshane. Indawo yokuhlala yenzelwe ikakhulu ukuya kuthi ga kwi-5 abantu - ibhedi ephindwe kabini kwigumbi elinye kunye neengoma ezi-3 kwelinye.
Inokulala ukuya kuthi ga kwi-8 kunye nebhedi enye egobileyo kunye nesofa ekwigumbi lokuhlala nayo iyibhedi ephindwe kabini ukuba iyafuneka. Kodwa u-8 uyakukwenza uzive uxinana kakhulu ukuba uyithathe njenge 5 mhlawumbi 6 indawo yabantu (ukuba igumbi eliphindwe kabini abantu abanangxaki yokwabelana nebhedi egotyiweyo). Inabo bonke ubutofotofo basekhaya oya kubufuna ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ishawa kunye nebhafu, iTV kunye neDVD kunye neFiber ekhawulezayo yefiber wifi. I-cottage inobushushu obugcweleyo obuphakathi kunye nesitovu somlilo welog esinezigodo zasimahla ukuba unqwenela ukusisebenzisa. I-Ballyboe ivalelwe ngokupheleleyo kwaye ikhuselekile kwimihlaba yayo ngoko ke inobubele ebantwaneni. Ine-drive kunye neendawo zokupaka ezitratweni zokhuseleko olongezelelweyo kunye nokhuseleko. Iindwendwe zifumana kuphela indawo yokuhlala kunye neendawo ezingqongileyo kwaye abamelwane abakufutshane ngexesha lokuhlala bakwi-100 yeemitha kude. Ngasemva kwendlwana unebala lakho leehektare ezi-6 ukuze uphonononge ngokupheleleyo ihlathi lentsomi kunye neplanga layo lebluebell kwaye kusenokubakho isibini samahashe anobuhlobo ebaleni xa usiza kwaye ukuba bayayithanda ukuba uyayithanda. bondle iminqathe ngexesha lokuhlala kwakho! I-cottage ibiyelwe kakuhle ukusuka ebaleni nangona kunjalo amahashe ahlala ebaleni. Ngaphaya koko kukho ezinye iihektare ezi-5 zehlathi lomlingo elityalwe nguTony ngo-2007 ukuba ukhululekile ukuba uliphonononge ngexesha lakho lokuphumla. Azikho iindawo ezininzi onokuya kuzo ukuze ufumane i-cottage yemveli yaseDonegal emnandi kangaka kunye neehektare ezili-11 zemihlaba yokuhamba nayo yonke ngexabiso!
IBallyboe ikwilali ekufutshane nedolophu yaseMalin. Ingaphezulu kwe-100 leemitha ukusuka kweyona ndlu ikufutshane ke ngoko ukukhuselwa ngokupheleleyo kuqinisekisiwe. Ibekwe kwindawo yayo yeehektare ezi-6 zomhlaba wokufama kunye nehlathi emva koko. Unokuziphonononga ezi nangona umnini akanakwamkela uxanduva ukuba uyaxolisa!
I-Ballyboe ibekwe ngaphakathi kwe-Inishowen Peninsula entle ngokumangalisayo neyinxalenye yeNdlela ye-Wild Atlantic. Imbonakalo yelizwe iyamangalisa. Kukho iilwandle ezintle kunye nezinto ezinomtsalane ezikufutshane njengeMalin Head eyona ndawo isemantla eIreland, iDoagh Famine Village ekungafunekiyo iphoswe, Fort Dunree, Ballyliffin Golf Club apho i2018 Irish Open yabanjwa yimizuzu nje eli-10 kwaye nokunye okuninzi.
I-Ballyboe ikwayindawo entle yokuphumla kwaye ungenzi nto kwaphela!
Ukutya okuninzi kunokufumaneka kwidolophu yaseMalin apho kukwakhona ii-pubs ezimbini zokuhlangana nabantu basekhaya kwaye uve umculo kunye neevenkile ezinkulu ezikwiCarndonagh 7km miles away. I-pub yaseMcGrorys edumileyo eCuldaff ikumgama oziikhilomitha ezi-5 kuphela kwaye kukho iipabhu ezilungileyo ezimbini kwidolophu yaseMalin kwaye iLily ineseshini zomculo wesintu ngobusuku obuthile.
Iyafumaneka njengoko kufuneka ukudibana kunye nokubulisa kwaye nokuba kufutshane ukuba iindwendwe zineemfuno ezithile okanye iingcebiso malunga nendawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Malin